Ezinye engenzi nzuzo adalwe abasunguli yabo njengoba yesihle. Lesi sihloko kufanele kuqale umbuzo "Kuyini esiza abantulayo?" Futhi impendulo kuyona. Sencazelo "yokunikela" eziqukethwe Art. 6 uMthetho Federal №135 «On imisebenzi yokusiza umphakathi nezinhlangano yesihle" ka 11.08.1995, inkampani ulula futhi ecacile: esiza abantulayo iyinhlangano engenzi nzuzo amiselwe ukuqaliswa izinjongo charitable emsebenzini umhawu for nomphakathi wonkana noma isigaba esithile sabantu. Uhlu izinjongo yesihle kuyinto oluphelele futhi kuqukethwe Art. 2 soMthetho. Nikeza izibonelo le migomo elandelayo: ukukhuthaza Ukuvikelwa ebuntwaneni, ngumama nokuba ngubaba, imisebenzi ezingeni wezamasiko ngokomzimba kanye nemidlalo, nokunye.
Lo mthetho uqukethe definition yomsebenzi yesihle. -Charity kuyinto umsebenzi wokuzithandela ngabanye kanye nezinhlangano ukuqaliswa imisebenzi ongenabugovu namasevisi, kanye ukudluliswa ngaphandle kwemibandela impahla izakhamuzi nezinhlangano ezingokomthetho. Gratuitousness yalo msebenzi sici zako ezisemqoka. Ngokuvamile izinhlangano ezisiza zisebenzisa sokuzithandela zabasebenzi ukuze bafeze imisebenzi yokusiza umphakathi mahhala. Lezi abantu izinhlangano zosizo ungene ezivumelwaneni nazo, okuyizinto bemvelo civil. Isihloko izivumelwano ezinjalo kuba ukubulawa oludlulele imisebenzi / amasevisi. The esiphezulu collective ukuphathwa komzimba yokunikela futhi uyobe usebenza ezingeni yokuzithandela, mahhala. Abasunguli we yokunikela angenalungelo lokukwazi ukwaba bodwa inzuzo wathola esiza abantulayo. Ngenhloso yokwenza ukudalwa yokunikela - bafeze imisebenzi yesihle ngokuhambisana nezinhloso livikeleke senhlangano.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi esiza abantulayo kuyinto engenzi inzuzo, ngakho kwabaphiwayo asetshenziswa ngesikhathi esifanayo izinhlinzeko zoMthetho Federal Law №135 «On imisebenzi yokusiza umphakathi nezinhlangano yesihle" futhi izinhlinzeko zoMthetho Federal Law №7 «On kohwebo Izinhlangano". izinhlangano ezisiza kungadalwa kuphela ngesimo izimali, izinhlangano zomphakathi kanye nezinye izikhungo. Awekho amafomu okwengeziwe wezomthetho izinhlangano ezingenzi nzuzo ukudala izinhlangano ezisiza ayifanele.
UMthetho iqukethe imikhawulo enkulu imisebenzi ngezinhlangano ezisiza ngesihle:
Okokuqala, umsebenzi ezinhlanganweni ezisiza kuphela ngokuhambisana nezinhlelo ezisiza ngesihle. Lezi zinhlelo aqukethe iqoqo izinyathelo ezihlose ukuxazulula imisebenzi ethize kuchazwe ngokuhambisana lomthetho imigomo yenhlangano. Ivunywe ngu umzimba obuphakeme yesihle Uhlelo ukuphathwa kwenhlangano. Ukuze sifake izimali izinhlelo yesihle kumele kusetshenziswe hhayi ngaphansi kuka-80% imali engenayo ngenxa ifastela elingasebenzi, etholwe ekungalayishweni yokuthengisa imisebenzi, imisebenzi yebhizinisi kanye nezinhlangano ibhizinisi, owenziwa yokunikela.
Ukulandela komkhawulo ukuthi esiza abantulayo unelungelo lokusebenzisa ekukhokhweni nezokuphatha nezabasebenzi lemali esingeqile 20% izimali wachitha yinkampani ngonyaka wezimali.
Enye umkhawulo isethwe kanje: 80% umnikelo yesihle osizayo ngocansi imali okufanele isetshenziswe yokunikela unyaka 1 kusukela ngosuku kokuthola iminikelo enjalo. Nakuba umthetho uvumela ukuba amuke mthetho kuleli cala, ngaphandle uma kungenjalo enikeziwe uhlelo esiza abantulayo noma umuntu osizayo ababenza lo mnikelo.
Ngaphezu imikhawulo yezimali ebekwa mthetho, ngezinhlangano zosizo ziyadingeka ngokuqinile athobele imfuneko ukunikeza yokubika ekhethekile. Ngaphezu izitatimende zezimali, benikela yonke izinhlangano ezingokomthetho, izinhlangano ezisiza kudingeka ukuthi unikeze ukuba izidumbu zabantu Ministry of Justice zokubika ekhethekile. Lokhu kubika sibandakanye nale mininingwane elandelayo:
- ulwazi imisebenzi ezezimali nezomnotho inhlangano;
- Ulwazi on the lezisebenzi zehhovisi esiphezulu ejensi;
- ulwazi yesihle izinhlelo Inhlangano (uhlu zabo kanye nencazelo);
- ulwazi ukusebenza kwenhlangano;
- ulwazi ukwephulwa nezidingo zoMthetho Federal "Ngo imisebenzi yokusiza umphakathi nezinhlangano yesihle", ngaphandle kokuba awabonakali ngenxa Ukuhlolwa kwezinkampani iziphathimandla zentela, kanye ulwazi izinyathelo ezithize ukubhekana nazo ukwephulwa.
Uma ukwephulwa okuphindiwe yokunikela, ke luqedwe indlela ayimpoqo.
Izinhlangano eziqoqa iminikelo yabahluphekile ngokuqinile kulawulwa umthetho. Ngakho-ke, ngaphambi zokunikela obhalisiwe, kufanele waphinda uhlole kakhulu ngokucophelela imithetho ekhona, kanye nakho isikhathi eside futhi izinhlangano zosizo ezisebenza ngempumelelo.
Kolomna Heavy Machine Ithuluzi Plant
Yini ukuletha njengesipho esivela Goa?
Kuyini shigellosis futhi indlela yokuphatha kulo
Inkukhu Broilers: Disease Control and Prevention
Kwezinye izimo, imithi ngokweqile zifana nokuthela enqunyiwe ingane? Imithi elwa namagciwane izingane ezingaphansi konyaka: ethile yokwelashwa